TCDD Inozivisa Mamiriro Ekutenga kweChipinda Makontrakiti Yechibvumirano | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraTCDD inozivisa Conditions pamusoro Purchase vakabatwa mutekenyi
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya, TURKEY
tcdd yekufambisa chibvumirano mechanic akatsanangura mazwi ekutenga
Republic of Turkey State Railways (TCDD) General Directorate yeTraffic, Inc. maererano nesungano ichashandiswa mechanic, yakatemwa misimboti uye maitiro ekuti bvunzo dziitwe nechimiro chekomisheni yekubvunzawo.
Akabvumidzwa Machinist Kuongorora uye Kugadzwa Mutemo kuti ushandiswe kuGeneral Directorate yeTCDD Tasimacilik Anonim Şirketi rakaburitswa muGazezi Gurukota uye rakapinda musimba. Nemurau, mamiriro ezvinhu anofanirwa kutsvaga kune avo vanozogadzwa kwenguva yekutanga pachena kune chibvumirano chemachinist chinzvimbo, fomu remasuo ekupinda mabvunzo kuti riitwe, uye maitiro nenheyo zvine chekuita nekomisheni yekubvunzwa zvakatemwa.
Zvinoenderana nemurairo wakabudiswa naTCDD Taşımacılık A.Ş. mune Iyo Gazeti Inoshamisa;
1- Entrance bvunzo rine yakanyorwa uye yemuromo / inoshanda bvunzo. Kuongorora kwakanyorwa; ÖSYM inogona kuitwa nemayunivhesiti uye Ministry of National Education kana mamwe masangano neveruzhinji nemasangano akakosha mune ino ndima.
2- Kuzivisa bvunzo kuchaziviswa kwasara mazuva makumi matatu pasati yanyorwa bvunzo zuva.
3- Vanopedza kudzidza dhipatimendi rine hukama neyezvitima njanji neinosvika makumi manomwe kubva kuKPSS vachakwanisa kunyorera, uye kagumi nhamba yakakwana yenzvimbo dzakavhurwa dzizoendeswa kunonyorwa bvunzo.
4- Ruzivo rwehunyanzvi ruchabvunzwa mukunyorwa bvunzo.
RUDZIDZO RUKUDZIDZWA MUZVIMBO ZVINYORA DZINOGARA DZAKAITWA 22MAY 2020
Izvo zvakaburitswa muGazeti Gazeti Nhamba 22 yomusi wa Chivabvu 2020, 31134.
Transport of Zimbabwe Turkey State Railways Joint Stock Company Headquarters:
Turkey State Railways KUTAMBUDZIRA Joint STOCK Kambani KUTI VANOPANGWA PAKUTENGESESA DZESIMA YEMAKARA KUONYESESA UYE KUTI VANODZIDZIRA KUNYORA UYE MISHANGO
Chinangwa, Nzvimbo, Nheyo uye Tsanangudzo
NYAYA 1 - (1) Chinangwa cheMutemo uyu; Republic of Turkey State Railways Transport Joint Stock Company General Directorate ye22 yakanyorwa uye 1 yakaverengerwa Mutemo pachibvumirano kwenguva yekutanga yakapihwa mamiriro ezvinhu kuti asangane kune avo kuve pachena pachena kune chinzvimbo chinjini, chimiro chebvunzo yekupinda chichaitwa kuti ione maitiro nenheyo zvine chekuita nekomisheni yekuongorora nekuita.
DZIDZO 2 - (1) Iyi mvumo, 18 yakanyorwa uye 3/2002 yakaverengerwa Council yeVashandi Sarudzo, yakakwazisa Kutsvaga Kwveruzhinji kune Yekutanga Nguva yekuita kugadzwa miedzo Pamusoro peRepublic of Turkey kunze kweGeneral Mitemo yeHurumende njanji yeChitima Chekutengesa Joint Company. Iyo inovhara iyo yekutanga nguva yekugadzwa pachena kune iyo yakagadzirirwa contract yemachinist chinzvimbo pasi peChirevo cheMutemo.
DZIDZISO 3 - (1) Uyu Mutemo chinyorwa chegumi nesere cheChisungo-Mutemo Nha. 399, Mutemo-Mutemo pamusoro pePublic Economic Enterprise Nha. 8 musi wa 8/6/1984 uye Sarudzo Nha. Yakanga yakagadzirirwa pahwaro hwe.
CHIKAMU 4 - (1) Muchirevo ichi;
a) Iyo Director General weRepublic of Turkey General maneja weiyo State Railways Transport Joint Stock Company,
b) Iyo Directorate General yeRepublic of Turkey General Directorate ye State Railways Transport Joint Stock Company,
c) Kupinda bvunzo: Kuongorora kunosanganisira kwakanyorwa uye nemuromo / zvinoshanda zvikamu zvevanyori,
ç) KPSS: Veruzhinji Vashandi Sarudzo Kuongorora kweboka (B) vashandi zvinoenderana neGeneral Regulation paMubvunzo Kuiswa Kwekutanga Nguva Kuenda Kune Voruzhinji Positions,
d) Machinist (mudzidzisi wemuchina): Mukati me nguva yekushanda uye nemitemo yekushanda yakatemwa nemutemo, zvakachengeteka, zvakanaka uye nehupfumi, hutano hwebasa uye kuchengetedzeka, nharaunda nemamiriro emhando, zvichitevedza mutemo, mirayiridzo yebasa, kuburitsa mota dzemoto uye chitima, ichienderera ane hunyanzvi munhu anokwanisa uye anokwanisa
e) ÖSYM: Chiyero, Selection uye Placement Center,
f) Komisheni yekuongorora: Komisheni inoona nezvekuitisa uye kuongorora maitiro ekupinda pabvunzo nenzira yakavanzika uye pasina kuzeza uye kuzeza,
g) rezinesi rekutyaira: Zvinoreva kune gwaro rinoratidza kuti mutyairi wechitima ane hutano, hunyanzvi hwepfungwa uye hunyanzvi hunodiwa kuti uite basa rake zvakachengeteka.
Nheyo Pamusoro Pechidzidzo Chekupinda
Kuumbwa kwekuongorora komisheni
DZIDZISO 5 - (1) Komisheni inoongorora inoitwa kuti iite bvunzo. Komisheni inoongorora inenhengo dzenhengo shanu dzechigarire, nenhengo nhatu dzinotemerwa Mutungamiriri weVashandi uye Dzekutonga pasi pehutongi hweGeneral Manager kana Mutevedzeri Wanejeneral General anogadzwa naGeneral Manager. Pamusoro pezvo, nhengo ina dzinotsiva dzakatemwa naGeneral Manager nenzira imwe chete uye kana nhengo dzepakutanga dzisingakwanise kujoina komisheni yebvunzo nekuda kwechikonzero chero chipi, ivo vanopinda vanopinda mukomisheni.
(2) Sachigaro uye nhengo dzekomisheni yekubvunzawo; Kunyangwe ivo vakarambana, kunyangwe ropa ravo nehukama hwehukama kusanganisira chetatu degree zvopera, hama dzekwavo, avo vakatora chibvumirano navo kana vavakaroora, vavakaroorana navo, avo vanopihwa simba senge yavo kana muchengeti wemurume kana mukadzi, muchengeti, mutiririri kana vemutemo vanachipangamazano havagone kutora bvunzo. Nhengo inotsiva inogadzwa munzvimbo yenhengo dziri mumamiriro ezvinhu aya.
Izvo basa rekuongorora komisheni
DZIDZO 6 - (1) Komisheni inoongorora ine basa uye rakapihwa mvumo yekuona kuti zvinhu zvinofanirwa kuverengerwa mukuzivisa kwebvunzo, kuitisa bvunzo, kuongorora uye kupedza izvo zvinopesana uye kuita mamwe maitiro ane chekuita nezvebvunzo.
(2) Komisheni yekuongorora inosangana nehuwandu hwenhengo uye inotora sarudzo nevazhinji vavhoti. Munguva yekuvhota, kudzivisa mavhoti hakugone kukandwa. Avo vasingabvumi vanofanira kutaura mavhoti avo kwavari uye nekuzvireverera kwavo.
(3) Sevhisi dzevashandi vekomisheni yekuongorora inoitwa neVashandi neDhipatimendi Rezvekutonga
DZIDZO 7 - (1) Kupinda bvunzo kunoitwa nekomisheni bvunzo dzimwe nguva kunoonekwa kwakakodzera naGeneral Directorate maringe nenzvimbo isina munhu uye chinodikanwa. Bvunzo dzekupinda rine bvunzo dzakanyorwa uye dzemuromo / dzinoshanda.
(2) Bvunzo dzeKunyora bvunzo dzakanyorwa; ÖSYM inemayunivhesiti uye Ministry of National Education kana mamwe masangano neveruzhinji nemasangano akakosha mune ichi chidzidzo. Zvinhu zvine chekuita nezvebvunzo zvinotarwa negwaro pakati peGeneral Directorate nenzvimbo ichaitirwa bvunzo.
Chirongwa chekupinda chiziviso
YENYAYA 8 - (1) Mamiriro ekutora bvunzo yekupinda, chimiro chebvunzo, zuva nenzvimbo yebvunzo, iyo diki KPSS mamakisi, nzvimbo uye zuva rekushandisa, fomu rekushandisa, zvinyorwa zvinofanirwa kunge zvichikumbirwa mukushandisa, kero yewebhu, chinyorwa chebvunzo, huwandu wenzvimbo dzakarongwa kugadzwa uye zvinodiwa dzimwe nyaya dzinoonekwa mazuva makumi matatu mazuva ekunyora asati anyorwa Izvo zvinonzi zvaziviswa mugwaro repamutemo uye pawebsite yeGeneral Directorate uye webhusaiti yenzvimbo yakatarwa neMutungamiriri.
DZIDZISO 9 - (1) Avo vanoda kutora bvunzo dzekupinda vanofanira kusangana nemamiriro ezvinhu anotevera seyaita nguva yekupedzisira.
a) Kutakura mamiriro ezvinhu akataurwa munyaya 399 yeDare Law 7.
b) Kuve nerezinesi rekutyaira chechitima.
c) Kupa yeinenge imwe yeanotevera mamiriro mamiriro edzidzo:
1) Kupedza kudzidza kubva kune yeimwe njanji njanji tekinoroji njanji michina emagetsi-magetsi, njanji michina michina, njanji michina machina emagetsi emachechi ekusekondari zvidzidzo zvinopa hunyanzvi uye hunyanzvi kudzidza.
2) Makore maviri-ekudzidzira basa; njanji michina zvemagetsi uye zvemagetsi zvemagetsi, njanji michina michina technology, njanji nzira zvemuchina, njanji michina mechanics, njanji maneja manejimendi, michina, injini, yemagetsi, yemagetsi-yemagetsi kudzidza.
3) Kupedza kudzidza kubva kumakore mana engineering, njanji njanji kana technical mudzidzisi undergraduate chirongwa chemayunivhesiti.
ç) Kuve wakawana chiyero chidiki chakatemwa mukupinda bvunzo yekuzivisa, isiri pasi pemakumi manomwe emakero kubva kuKPSS, iyo nguva yechokwadi inoenderera mberi, sekunge chikamu chedzidzo chakapedza.
Test Entrance Exam application
DZIDZISO 10 - (1) Kupinda bvunzo kunyorera kunyorwa kunogona kuitwa kukero yakatsanangurwa mukushambadza iwe pachako kana netsamba kana padandemutande kana zvakatsanangurwa kushambadzira.
(2) Vanodaidzira vanoda kutora bvunzo dzekupinda vanowedzera magwaro anotevera pafomu rekunyorera ravachazowana kubva pawebsite yeGeneral Directorate:
a) Kopi yepakutanga kana yakasimbiswa dhipuroma kana chekupedza kudzidza (yekutanga kana yakasimbiswa kopi cheti diploma zvakafanana chitupa kune avo vanenge vapedza dzidzo yavo kunze kwenyika).
b) Kushandura komutori weKPSS chigwaro chekupedzisira.
c) Chitambi chekutyaira.
ç) Ramba zvakare.
d) Mapikicha matatu pasipoti.
e) Photocopy yekodhi yekutanga kadhi yeTurkey Republic nekuratidzira iyo yekutanga.
f) Chirevo chakanyorwa chekuti hapana hurema hwepfungwa kana hwemuviri izvo zvinogona kumutadzisa kuita basa rake.
g) Chirevo chakanyorwa chevanhurume vevakakwikwidza kuti havana hukama nevechiuto.
ğ) Mamwe magwaro akakumbira muhofisi.
(3) Kunze kwekugamuchirwa kwezvikumbiro pamusoro pe internet, zvinyorwa zvakanyorwa mundima yechipiri zvinofanirwa kuendeswa kuGeneral Directorate kusvika kumagumo emaawa ekushanda. Aya magwaro anogona kubvumidzwa neVashandi uye Dhipatimendi Rezvekutonga Nyaya, chero zvawo akaendeswa.
(4) Nezve mafomu akaitwa netsamba, zvinyorwa zvakanyorwa mundima yechipiri zvinofanirwa kunge zvasvika kuDirector General kutozosvikira nguva yekupedzisira yataurwa mukuzivisa kwekupinda. Zvikumbiro zvakanyoreswa kuDirector Directorate mushure mekunonoka mune tsamba uye nguva yekufambisa nguva yakawedzerwa haina kutarisirwa.
DZIDZO 11 - (1) Dhipatimendi reVashandi neVatongi vanoongorora manyorerwo akaitwa mukati menguva yakatarwa kunyorwa bvunzo, uye ndokuona kuti ivo vanokwanirisa zvinodiwa here. Zvikumbiro zvinowanikwa zvisingasangane chero zvemamiriro anodiwa hazvizoongororwe.
(2) Vanyoreri vanosangana nezvinodiwa vanopihwa padanho rekutanga kubva kune anenge achivhotera aine mucherechedzo wepamusoro-soro muKPSS chinyorwa chirevo chakaziviswa uye kusapfuurisa kakapetwa kagumi nhamba yenzvimbo dzakarongwa kugadzwa. Vanokwikwidza vane mucherechedzo mumwechete sewemugumiriri wekupedzisira akagashirwa nemhando ye KPSS mamakisi vanokokwawo kunyorwa bvunzo. Mazita uye mazita evafanirwa kukwikwidzwa uye nzvimbo dzebvunzo zvakaziviswa pawebsite yeGeneral Directorate kwasara mazuva gumi pasati papinda bvunzo. Uye zvakare, vanyoreri vanoziviswa nezvemhedzisiro yekunyorera zvakanyorwa uye / kana zvemagetsi.
(3) Avo vasingakwanise mamiriro ekunyorera uye vanenge vachivhotera vasingakwanise kupinda muzvikamu vanoendeswa kwavari kana vari vega mazuva makumi matatu kubva pakaziviswa mazita ezita revaya vanogona kutora bvunzo dzekupinda.
Kunyora kuongorora uye nyaya
DZIDZISO 12 - (1) Yese yemibvunzo yakanyorwa chikamu chebvunzo yekupinda yakagadzirirwa kubva kuruzivo rwemunda wehunyanzvi hwakataurwa mukuzivisa kwekupinda.
a) Yekutanga uye yekubata basa hutano nekuchengeteka (OHS).
b) Kutungamira uye kutyaira mafomu.
c) Kufamba kwechitima uye kushanda kwechitima.
ç) Tsika yehunyanzvi, kuchengetedzwa kwenzvimbo uye kupindira kune zvinoshamisa mamiriro.
d) Mutauro weTurkey uye kutaura.
(3) Kuongorora kwekunyora kwakanyorwa kwakapedzerwa pamusoro pezana zana. Kuti zvibudirire mukuongorora, zvakakosha kuwana makumi manomwe mashoma.
Dana kumuromo / kuongororwa kwakaitwa
DZIDZO 13 - (1) Pakati pevachavhoterwa vanowana zvibodzwa zvinosvika makumi manomwe kubva pane zana zana ezere kubva pabvunzo rakanyorwa; Mazita evanozovhoterwa (kusanganisira iwo anowana mapoinzi akaenzana nemubhadharo wekupedzisira), dzinoverengeka katatu huwandu wenzvimbo dzakarongwa kugadzwa kubva padanho repamusoro mune bvunzo dzakanyorwa, dzinoziviswazve pawebhusaiti reGeneral Directorate nekuratidza zuva nenzvimbo yebvunzo yemuromo / yakaiswa. Uye zvakare, vanenge vachizotora bvunzo nemuromo vanoziva nezvezuva nenzvimbo yebvunzo iyi mune yakanyorwa uye / kana fomu yemagetsi.
(2) Oral / Nhamba musarudzo kunzi anoshanda kuongororwa havagoni kuva anopfuura 40% mukuwanda musarudzo vakokwawo kuongorora zvakanyorwa.
Muchirevo / kuongororwa kwakaitwa
DZIDZISO 14 - (1) Vanozo bvunzwa mumuromo bvunzo.
a) Nyaya dzine chokuita nemunda webasa reGeneral Directorate pamwe chete nehurukuro dzinotaurwa muchitaridzo chekuongorora mukova,
b) Kuongorora nekupfupisa nyaya, kukwanisa kutaura uye kusimbisa simba,
c) Kufanirwa, kukwanisa kumiririra, kukodzera kwehutano uye kugadzirisa kune basa,
d) Kukwanisa kwepamusoro uye hutsika hutsika,
d) Kusununguka pakubudirira kwezvesayenzi neyemagetsi,
Kubva pachiyero chimwe chemazita zana, makumi mashanu e subparagraph (a) uye makumi mashanu ezviumbwa zvese (b) kusvika (d). Zviyero zvakapihwa nenhengo yega yega yekomisheni yekubvunzurudzwa zvinonyorwa zvakasiyana uye nemuromo wekuongororwa mamaki evashandi anotemerwa nekutora arithmetic average yezviyero zvakapihwa nenhengo pamusoro pezana remazero akazara. Ivo vanowana anosvika makumi manomwe emapfumbamwe ezviuru kubva muzana mune iyo bvunzo yemuromo vanoonekwa sevanobudirira.
(2) Kushandisa kuongorora, maererano nemitemo uye mitemo yakataurwa muzvakazi.
Chiziviso chemukova wokuongorora mhinduro uye kukanganisa kuongorora mhinduro
DZIDZISO 15 - (1) Pfungwa dzinosvika makumi manomwe dzinofanirwa kutorwa kubva pane imwe neimwe yeyaakanyora uye mumuromo / mairi bvunzo kuti iongororwe kubudirira pabvunzo yekupinda. Vavhiki 'yekupedzisira zvibodzwa zvinowanikwa nekutora arithmetic avhareji yakanyorwa uye yemuromo / yakashandiswa bvunzo mamakisi. Zvinoenderana neaya arithmetic anverages, budiriro yekuronga inogadzirwa. Nekuongorora vavhoti kuitira kuti ubudirire kutanga kubva kumhando yepamusoro-soro, komisheni inoongorora inosarudza vakawanda sehuwandu hwehuwandu hwematareji hwakaziviswa uye nevazhinji sehafu yevachavhotera seyero, uye vanosunga izvi kune mushumo. Kana huwandu hwakaverengerwa wevamwe vanomiririra vakaremara, huwandu hwepamusoro hunotorwa sehwaro. Pachinzvimbo muzvinyorwa zvepamusoro uye nezvakachengetwa, anenge achinyora akapihwa danho repamberi kana muedzo wevanyori uchibvira wakaenzana, uye mumiririri aine huwandu hweKPSS hwakakura kana huwandu hwakanyorwa hwakaenzana. Runyorwa rwekupedzisira rwebudiriro rwakatemerwa komisheni yekubvunzurudza inotumirwa kuDirectorate yeVashandi uye Nyaya dzekutonga.
(2) Nzira yekubudirira ichazoziviswa mubhodhi rebhodhi uye pawebsite yeGeneral Directorate. Mukuwedzera, migumisiro yevakagadzikana vanobudirira inoziviswa mukunyora uye inobvunzwa kuti ipe zvinyorwa.
. Zvinopokana zvinoongororwa uye zvinofungwa nekomisheni inoongorora mukati memazuva manomwe kubva pakupera kwenguva yekupokana. Mhedzisiro yekukwirira inoziviswa kune anenge achinyorera.
(5) Kuva nenhamba yemakumi manomwe nepamusoro pabvunzo yekupinda hakuzi kodzero yekuwanikwa yevanenge vasingakwanise kuverengerwa. Kana huwandu hwevanopasa bvunzo hwakaderera pane huwandu hwezvinzvimbo zvakaziviswa, avo chete vanobudirira ndivo vanonzi vanopfuura bvunzo. Kutora chikamu mune yekuchengetera runyorwa hazvireve kodzero yakapihwa kana chero yakatarisirwa kune vanozo bvunzurudzwa mune dzinotevera bvunzo.
DZIDZO 16 - (1) Mhedzisiro yeavo vanowanikwa vakaita chirevo chenhema kana kuendesa magwaro mufomu rekusvitswa kunoonekwa seisingabvumirwe uye migove yavo haina kuitwa. Kunyangwe kana migove yavo yakaitwa, ivo vanodzimwa. Izvi hazvigoni kuti chero kodzero.
(2) Mhosva dzomumhosva dzinowanikwa kuHhovisi reMutungamiriri weParamende pamusoro pevaya vanowanikwa vakareva nhema kana kupa zvinyorwa.
Kuchengetedza magwaro ekuongorora
DZIDZO 17 - (1) Zvinyorwa zvine chekuita nekuongororwa kweavo vakagadzwa, mune mafaira eruvo kune avo vanobatwa; Zvinyorwa zvebvunzo zveavo vanokundikana uye havagone kugadzwa nekuda kwechikonzero chero chichibudirira.
Basa uye Chiziviso kune Vashandi Vakatengesa
Zvinyorwa zvokukumbira musati maita
DZIDZO 18 - (1) Vanyoreri vanopasa bvunzo dzekupinda vanokumbirwa magwaro anotevera:
a) Gwaro rinotaura kuti vavanoda kukwikwidza havana hukama nevemauto.
b) Mapikicha matanhatu pasipoti.
c) Tsotsi rematsotsi.
ç) Mushumo wehutano hwehutano hunowanikwa kubva kune avo vanopa hutano hwehutano hwehutano hune hutano hwokuti hakuna hutano hwepfungwa kana hwepanyama hunogona kudzivirira tsanangudzo dzinotaurwa mubasa racho kuita basa rayo.
(2) Dare dzisingabudisi zvinyorwa izvi hazviiti.
Basa kune vashandi vane kambani
DZIDZO 19 - (1) Nekuda kwebvunzo, vanenge vachisarudzwa vakaenzana nehuwandu hwenyaya dzichaziviswa.
(2) Vaya vakabudirira mukuongororwa havakwanisi kuonekwa sevasina maturo, uye migumisiro yechipimo haisi kubviswa, kunyange kana ikaitwa.
(3) Basa risati raitwa musati wasunungurwa.
(4) Kugadzwa kweavo vakagadzwa kusati kwatanga mukati memazuva gumi nemashanu pasina zvikonzero zvekumanikidza kuratidza negwaro zvinobviswa. Kana chokwadi chekuti vatadza kutanga basa nekuda kwezvikonzero zvinogombedzera negwaro rinopfuura mwedzi miviri, nzira yekugadzwa inobviswa nevane masimba vanobvumidzwa kugadza.
. basa rinogona kuitwa.
Zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana uye zvekupedzisira
DZIDZO 20 - (1) Ruzivo nezveavo vakabudirira pabvunzo dzekupinda, vakagadzwa, ndokutanga kushanda, uye nevaya vasina kutanga basa kunyangwe basa ravo rakadzimwa kana kuti rakapihwa basa, kune Ministry of Family, Labor and Social Services kuburikidza nePublic e-application system mukati memazuva gumi neshanu kubva pazuva rakatorwa zvinhu. zvakataurwa.
DZIDZO 21 - (1) Mune zviitiko kana pasina chinopihwa mumutemo uyu, iyo Civil Serviceants Law Nhamba 14 yakanyorwa 7/1965/657, iyo Mutemo Mutemo Nha. 399, Mutemo Mukuru weZvibodzwa zvinotorwa Kwenguva Yekutanga muMabasa eRuzhinji uye zvimwe zvinodiwa nemutemo zvinoshandiswa.
CHIKAMU 22 - (1) Iri Mutemo richapinda musimba musi wekubudiswa kwayo.
DZIDZISO 23 - (1) Zvigadzirwa zveiyi Regulation Republic of Turkey State Railways Transport Joint Stock Company yakaurayiwa naDirector General.
TCDD Kutakura Kuchaita 73 Machinist Reception!
TCDD Kutengesa kuchawana mushandi wemashandi
KPSS 2017 / 2 Zvaunoda TCDD 573 Kugamuchira Gwaro Roro uye Zvido Zvekushanda
TCDD Vashandi Vanoshanda Pasinei Nezvinetso Zvakaoma
TCDD 191 Vashandi Vashandi Kutenga Mazuva Nezvokushanda
TCDD 38 Chikumbiro Chekushanda uye Mazuva Ekutora Vanhu
TCDD Inotanga Nzira yekudzidzisa Mechanic
TCDD Inotakura Chitima Chechikoro Chinozivisa Dare Dzakasarudzwa
TCDD Transport Corporation KPSS Inoparidza 2017 / 2 Basa Dhiviso
Zvinetso zveTCDD Vatakuri vekutakura Vanotungamirirwa kuAgenda yeGungano
TCDD Kutakura Inobatanidzwa muTex Caspian International Transport Association Meeting
TCDD Kutakura 15 Inotakura Zviuru zvevagari muna July
TCDD ichava TCDD Transportation Corporation